Ciyaarta Suugaanta Shumaca - Talooyin Khayaanada Nolosha Bilaashka ah Tilmaamaha - Nacnac Burburinta Saga Soodejis bilaash ah Caawin Khiyaamooyin
halkan ayaad joogtaa: Guriga / Guriga
Sideed u cabirtaa guusha maanta ka jirta dunida? Hagaag, waa dhacdo fudud oo qofku guuleysto haddii uu dhammaystiro hawlo adag oo aan walwal lahayn. Waxaad la kulmi doontaa xaalado badan oo leh dhibaatooyin. Ma iska dhiibaysaa uun? Hadaad sameyso, markaa ma dhadhamin kartaa macaanka guusha. Tani waa halka ciyaarta ee […]
Heerarka Burburinta Nacnaca Adag waa wax macaan oo aan qof kastaa ku raaxaysan. Laakiin kuwa sidaas sameeya, Waxaan hubnaa inay jiraan heerar fara badan oo ay ku heli karaan farxaddan. In kasta oo ay jirto jawi aad u xun oo kacsan oo ku xeeran heerarkaas oo ay weheliso qaylo iyo qaylo aan kasto oo aan ula kac ahayn, Mamnuucay Smartphone-ka oo mar dambe la hubin doono […]
Weligaa ma la yaabtay sida ay u qoto dheer tahay baddu? Intee buu weyn yahay galaxgayaga? Caalamku intee buu le'eg yahay? Sida heerarka Candy Crush Saga ay u jiri doonaan? Waxaan ula jeedaa, ma aha in aynu wali wada gudbinay; dhab ahaan, inteena ugu badan ayaa ka danbeeya cutubka hadda jira. Dhinaca lagu daray, […]
Qandhada Candy Crush ma dhacayso wakhti dhow, iyo sida dadku u sii gaadhaan heerar sare, xamaasaddoodu kor ayay u sii kacaysaa. Waa loop xun laakiin hab madadaalo leh. Heerarka adag waa qayb ka mid ah ciyaarta, sidaas awgeed waxaan u hindisnay qoraalkan si aan kuu siino Heerka Nacnaca 1442 Khiyaamada iyo tabaha! Mid […]
Marar badan ayaan ka hadalnaa farxad laakiin ma is waydiisay maxay tahay macnaha ay leedahay ? Waxay si fudud macnaheedu noqon kartaa nadiifinta caqabada aad ku xayirtay. Haddii ay dhacdo nacnac la burburiyo, Farxadda isticmaalayaasha waxay nadiifin kartaa heerka iyaga dhibaya. Ciyaartoy badan ayaa inta badan ka cawda, marka ay ku dhegaan a […]
Miyaad ka xanaaqsan tahay inaad ku dhegto isla meeshii aad joogtay? Ma dareemeysaa in noloshaadu aysan laheyn hadaf hadafkaas aan la gaarin? Haa, dad badan oo nolosha ka mid ah ayaa isku dareen ah haddii ay ku xayiran yihiin heer cayiman ciyaar. Sidaas awgeed, helitaanka farxad iyadoon la nadiifin a […]
There are people in this world who like challenges. They feel the best come out of them in a challenging world. They have to work out ways through which they can solve a complex level. Si kastaba ha noqotee, at times users get stuck. Certainly, kani waa waqtiga aad u baahan tahay tilmaan yar oo aad ka hesho meel kasta oo ay tahay […]
Weligaa ma dareentay in noloshaadu midab yar tahay? Ma jirtaa baahi loo qabo in noloshaada lagu daro midabyo? Hagaag haddii aad sidaas dareento markaa meesha ugu horeysa waxaa laga yaabaa inaadan weli ciyaarin burburin nacnac. Tani waa ciyaar nacnac midab leh. Qaar ka mid ah waxay leeyihiin xariijimo, qaar baa duuban qaarna waa uun […]
In today’s hectic world, we need to find moments just to ourselves, moments that make life worthy of living, moments that help us remain sane in this busy blur that we call life. Sidoo kale, we have to come with the easiest escape for you from the Candy Crush Jelly saga. About the Journey Candy Crush […]
Wali ma rumaysan kartaa in dadka qaar ay qorsheeyaan ciyaaraha fiidyaha kaligood? Waxaan ahay sida tan dhab ahaantii? Ma waxaad ku nool tihiin qarnigii 19-aad mise waa maxay? Maxay tahay sababta aan ugu xidhi lahayn asxaabtayada marka wax walba ay ku xiran yihiin aduunka maanta? Ma haysanaa wakhti aan la fadhiisano mar walba? Runtii maaha, […]
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Nofeembar 11, 2021 By Isabella Franks Faallo u dhaaf